Inona ireo toro-hevitra SEO afaka manoro hevitra ny manam-pahaizana amin'ny sehatry ny tranokala?
Ny sakafo ao amin'ny tranonkala dia ny fanampiana iombonana indrindra amin'ny tranokala ao amin'ny tranokalanao, ary misy fiantraikany mivantana amin'ny tranonkala fampiasana azy. Araka ny fanandraman'ny mpampiasa amin'ny loharanon-tranonkala iray raisin'i Google ho toy ny singa manan-danja, dia mila mandray anjara amin'ity lafiny amin'ny tranokala fanatsarana ity ianao. Noho izany, raha manontany tena ianao hoe nahoana ny tranonkalanao no tsy mahomby, izao no fotoana tokony hijerena ny karazan-tsakafo misy anao - commercial aircraft appraisal. Raha toa manintona ny tranokalanao dia tsy midika izany fa mora ny mandeha. Raha ny mpitsidika sy ny mpanjifa mety tsy afaka mahita ny làlany amin'ny tranokala na ny vokatra manokana hitadiavan'izy ireo, dia mila mamolavola na manatsara ny tranonkalan'ny tranonkala. Hanampy anao hanatsara ny taham-pihetseham-ponao izany ary hampitombo ny fiovam-po. Raha tsy misy ny fitaovam-pitaovana mahomby dia mety tsy hisy dikany ny tranonkala SEO. Azonao atao ny manakorontana ny mety ho mpanjifanao ary ampidiriny amin'ny loharanon-tranonkalan'ny mpifaninana aminao. Ao amin'ity torolalana fohy ity dia hahita toro-hevitra mahasoa momba ny fomba hananganana sehatra fitadiavana tsara indrindra amin'ny tranonkala ianao ary hanatsara ny tranokalanao SEO.
Aza mihoatra loatra ny sainao
) Eo noheverina fa ny tranokala iray dia tokony hanana sakafo tokana. Ireo tranonkala maoderina rehetra dia tokony manana rohy bitika kely ao amin'ny tranokala ambony ao amin'ny tranokala iray. Ireo rohy ireo dia tokony hanambara ny tranokalan'ny tranonkala ary ahafahan'ny mpampiasa mahita izay ilainy. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, loharanom-baovaon'ny tranokala e-commerce dia manana baoritra misimisy roa. Ny voalohany dia manondro ny fiovana amin'ny alàlan'ny tranonkala sy ny fizarana, raha iray kosa ny rohy hafa misy rohy mankany ivelany, toy ny profil media sosialy na famandrihana amin'ny gazetiboky. Manoro hevitra anao aho mba tsy hametraka ny zava-drehetra ao anaty sakafo. Raha tsy izany, ny sainao lehibe dia hanana fiheverana mahatsiravina ny rafitrao. Raha mamorona ny tranonkalan'ny tranonkala ianao dia tokony hifantoka amin'ny fampahalalana manan-danja sy manan-danja ary koa amin'ny tanjon'ny orinasa. Ohatra, raha irinao ny mpanjifanao hifandray aminao amin'ny alàlan'ny e-mail na ny laharan'ny findainao, mametraka rohy "Contact" ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala iray.
Mifidiana ny ankamaroan'ny bokotra
Mba hanatsarana ny tranokalanao SEO, mila misafidy ny bokotra izay ho tena ilaina ianao pototra ny mpanjifa. Raha te hifidy ireo bokotra tena ilaina ianao, dia mila mitarika fikarohana, mandalina ao amin'ny tranonkala analytics ianao ary mahita izay pejy manana ny fangatahan'ny mpampiasa indrindra. Ataovy azo antoka ny bokotra toy ny "Fanohanana Customer", "Mandidy amin'ny tsindry iray," "Abonnement," "Portfolio" sns. dia napetraka ao amin'ny tranokala maotera tranokala. Ny fametrahana tsy mety amin'ireo bokotra ireo dia mety hanimba ny raharaham-barotra ataonao ary hampiakatra ny taham-pifandraisana. Mba hahazoana antoka fa mahasarika ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny bokotra ankavanana ianao, dia mila averinao jerena ny lazan'ny endriky ny singa navanao amin'ny fampiasana ketaly.